Ndụmọdụ 4 maka Low Stakes Texas Hold'em - pisklak.net
Ndụmọdụ 4 maka Low Stakes Texas Hold’em
Mee 28 05:55 2021 nke Donald Phillips Bipute Nkeji edemede a
N’agbanyeghị ewu ewu ndị ọzọ na-egosiputa ụdị poker dị oke Omaha, Texas Hold’em ka bụ egwuregwu pọọks otu na ntanetị. Learnmụta iwu ndị ahụ ọ naghị ewe oge mana ịmalite ịbụ nna ukwu nwere ike iwe ọtụtụ afọ. Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ijide nke gị ma ọ bụ nke ọhụrụ d e poker, atụla egwu, anyị nwere ndụmọdụ anọ na-enye aka ị nwere ike iji na egwuregwun’okpuru $50 iji meziwanye ohere gịn’ọdịnihu.
1) Gwuo Tebụl aka isii
Egwuregwu ego kacha mma dị na tebụl 6-max. Chọta ndị egwuregwu wilder na omume rụrụ arụ yabụ ọ bụ ụdị kachasị mma ịnwale. Egwuregwu ndị nwere egwuregwu asatọ ma ọ bụ karịa na-adịkarị nitty. Ọ bụ mmadụ ole na ole na-ahụ flop t ndị egwuregwu ahụ chọrọ ikpori ndụ enweghị ndidi igwu egwu agba mgbaaka zuru ezu. Yabụ, ihe mbụ ị ga – eme bụ ịmụ ụzọ isii isi poker. Enwere ọtụtụ saịtị dị ukwuu nke na-enye ndụmọdụ maka otu esi egwu isii max. Perform uko sin’ọnọdụ na ike ike na mgbe e mesịrị na ọnọdụ na ị ga-n’ụzọ.
two ) Jide nwayọ na bluffs ahụ
Imirikiti ndị egwuregwun’egwuregwu egwuregwu dị ala nwere ọchịchọ ịkpọ gị ala.. Were nwayọ na nnukwu bluffs na mmeri gị ga-aka mma. Kama, chụsoo ndị na-eme ihe ndị ọzọ na-eme. Ha bụ ndị egwuregwu ị nwere ike ịgba ọsọ obere d e obere nsogbu. Ọkọlọtọ ọkpụkpọ na Micro osisi si egwuregwu na-akpọ ha onwe ha na kaadị ga-dị nnọọ na-akpọ gị ala ma ọ bụrụ na ha kụrụ a kụrụ dị kan’elu ụzọn’ihi ya, anaghị atụ anya na ha apịa otutu.
3) Nịm a nkwụsị ọnwụ ịgba
Nkwụsị nkwụsịtụ bụ iwu a manyere gị nke ị na-eme ka ọ pụta ìhè nke pụtara d e ị ga-akwụsị oge ahụ ma ọ bụrụ na ịnwe ụfọdụ ọnụ ọgụgụ nke ịzụta-ins. Nke a na-echebe gị bankroll dị ka ọ na-ana achi achi na ị gaghị afụli na-aga na fool off ọzọ buy-ins. Onu ogugu di nma di n’etiti ato na ise.
Nkwụsị nkwụsịtụ bụ ihe ndị egwuregwu kacha mma poker na-eme. Ọ bụ naanị ezi uche na njikwa njikwa ego. Ma ọ masịrị anyị ịnakwere un ma ọ bụ na anyị achọghị, anyị bụ ụmụ mmadụ ma na-enwekarị mmetụta nke mmetụta uche na-efunahụ self-evident kpebie ịkwụsị mgbe ị tufuru ihe ịzụta ga-enyere gị aka ijide onwe gị.
4) Enweghị egwu na-adịghị
Enweghị mkpa ịtọ ọnyà siri ike na ịzụta ala na egwuregwu ego. Ọtụtụ egwuregwu ga – akwụ gị ụgwọ ma ọ bụrụ d e ha kụrụ ka ị ghara iji aka anụ mara ihe. Websiten’ịkpọ un nwayọ, ị na-efunahụ ohere iji merie karịa. Ya only, nzọ aka gị dị ike dị arọ ma nwee olile anya na ha kụrụ ihe iji kpọọ gị. Chọrọ ịbawanye mmeri gị mgbe ịnwere aka dị ike nke only t ọ nweghị uru ị ga-eji aka anụ ọjọọ lelee ala iji nwee nnukwu ụbọchị ịkwụ ụgwọ na osimiri.
Isi ihe onyonyo: Unsplash